Tag: laza fitantanana | Martech Zone
Tag: fitantanana laza
Alarobia, Febroary 8, 2012 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Mahafinaritra hatrany ny mahita infographic izay manetsika hevitra vitsivitsy fotsiny… ary ity dia manao an'izany. Betsaka ny paikady hampiakarana ny varotra any fa ny mpivarotra no tena mijanona amin'ny fanapahan-kevitra hoe iza no tokony hitodihana. Mahalana isika no manana ny fahafaha-manao amin'ny fanaovana azy rehetra. Amporisihiko hatrany ny mpanjifa hampiasa teknolojia mitombo - amin'ity tranga ity dia tetika avokoa na ny mandeha ho azy ny finday sy ny marketing
Ry mpanjifa mpanararaotra
Zoma, Desambra 14, 2007 Alatsinainy, Septambra 24, 2012 Douglas Karr
Azoko antoka fa samy manana ny iray amin'ireo karazana mpanjifa ireo ny tsirairay. Tena voatahy aho nandritra ny folo taona lasa izay nanana mpanjifa izay tena faly niara-niasa tamiko. Hitako ny fomba nitondran'ny orinasa sasany ny mpanjifany ary halako izany. Izaho dia mikendry ny amin'ny serivisy avo lenta kokoa. Nanome toky tafahoatra aho ARY natolotra tafahoatra. Saingy, ampio… ilay mpanjifa iray… raha tsy azoko ny manoratra taratasy ho azy ireo… Ry mpanjifa mpanararaotra, miverina rehefa nifidy anay